मोरिंगा कसरी पुरुषमा यौन प्रदर्शन बढावा दिन्छ? - व्यक्तिगत विकास क्याफे
पोस्ट व्यवस्थापक | जनवरी 15, 2020 | स्वास्थ्य र कल्याण, आहार र पोषण, Superfoods |5|
1 किन मोरिंगा बीजहरूले पुरुषहरूको लागि यौन प्रदर्शन बढाउँछन्?
1.1 मोरिंगाले कसरी पुरुषहरूको यौन प्रदर्शन बढाउछ
1.1.1 मोरिंगा लिने तरिका
मोरिंगाले एक तथाकथित सुपरफूडको रूपमा ख्याति कमाएको छ। यो सम्भव क्यान्सर रोकथाम देखि लिएर धेरै स्वास्थ्य लाभ छ भनिन्छ तौल घट्नु। तर मोरिंगा प्रयोग गरी पुरूषमा यौन प्रदर्शन बढाउन सक्छ?
किन मोरिंगा बीजहरूले पुरुषहरूको लागि यौन प्रदर्शन बढाउँछन्?
आउनुहोस्, पहिले चिकित्सा तथ्यहरू जाँचौं। अब हामी जान्दछौं कि मोरिंगामा भिटामिन र पौष्टिक तत्वहरूको उच्च स्तर हुन्छ।
भिटामिन ए, सी र डीको उच्च सांद्रताका कारण पुरुषहरूमा सेक्स हार्मोनको स्तर बढाउन यो बीउ फेला पारिएको छ।
भिटामिन ए पनि ठूलो फाइदा हो जुन मोरिंगा उच्च छ। भिटामिन ए शुक्राणु उत्पादन र दक्षताका लागि महत्त्वपूर्ण छ।
भिटामिन सी तपाईंको प्रतिरक्षा प्रणाली मजबूत गर्दछ। भिटामिन सीले मात्र प्रतिरक्षा प्रणाली निर्माण गर्दैन (जुन यसको बदलामा बलियो इरेक्शनहरू सिर्जना गर्दछ), यसले लि to्गमा सर्कुलेशन र रगत प्रवाह सिर्जना गर्दछ।
भिटामिन डी टेस्टोस्टेरोन निर्माणको लागि महत्त्वपूर्ण र आवश्यक छ र फलस्वरूप कडा लामो चिरस्थायी निर्माण।
तिनीहरूसँग Saponin पनि हुन्छ, एक रासायनिक यौगिक जसले सेक्स हार्मोन टेस्टोस्टेरोनको स्तरमा सुधार गर्दछ र कामेच्छालाई बढाउँछ। यो संयोजन किन पुरुषहरूले यौन प्रदर्शन बढाउन मोरिंगा प्रयोग गर्दछन् भन्ने एक उत्कृष्ट उदाहरण हो।
टेस्टोस्टेरोन र ईरेक्शन निर्माणको लागि खनिज खनिज फलाम, क्याल्सियम र जिंक पनि मोरिंगामा प्रशस्त पाइन्छ।
मोरिंगा बिउहरू इरेक्टाइल डिसफंक्शनको उपचारमा पुरुषहरूलाई मद्दत गर्न देखाइएको छ पूर्वी औषधिहरूमा। बीउ वास्तवमा एक यौन वायरलि drug औषधि को रूप मा प्रयोग गरीन्छ। बीउहरूले निर्माणको कडाई बढाउन र तपाईंको यौन स्वास्थ्य बढाउन मद्दत गर्दछ।
बीजमा भिटामिन र कोएन्जाइमहरूले सेल्युलर विस्तार बढाउने इरेक्टाइल टिश्यूमा रगत प्रवाह बढाउँछन् र त्यसकारण इरेक्शनको आकार र कठोरता बढाउँछन्।
मोरिंगा बिउ क्याल्सियम र भिटामिन डीको उत्कृष्ट स्रोत हो। बीजको केवल थोरै मात्र सेवा दिनाले सबै थप फ्याट र क्यालोरी नपिई milk कप पूरै दूध पिउनु भन्दा बढी क्याल्सियम र भिटामिन डी प्रदान गर्दछ।
मोरिंगाले कसरी पुरुषहरूको यौन प्रदर्शन बढाउछ
त्यसोभए हामीले वैज्ञानिक तथ्यहरू र तथ्या ?्कहरू देख्यौं, तर मोरिंगा प्रयोग गर्नाले पुरुषहरूलाई भावनात्मक र शारीरिक रूपमा कसरी फाइदा हुन्छ?
अधिकांश व्यक्तिहरू सहमत छन् कि स्वास्थ्य स्वस्थ सम्बन्ध कायम गर्न को लागी एक महत्वपूर्ण कारक हो।
महान के हो भने त्यहाँ पुरुष र महिला दुबैका लागि धेरै स्वास्थ्य र भावनात्मक लाभहरू छन् जुन नियमित यौन सम्बन्ध राख्नुलाई श्रेय दिन सकिन्छ।
डा। लिसाले ड्युक विश्वविद्यालय अध्ययनलाई उल्लेख गर्‍यो कि देखाउँदछ कि प्रति वर्ष २०० पटक वा बढी सेक्स गर्नाले तपाईंको आयु छ वर्ष बृद्धि गर्न सक्दछ।
प्राय जसो संभोगमा संलग्न भएर, त्यहाँ एक प्राकृतिक बढावा पनि छ आत्म-सम्मान र आत्म-विश्वास.
यहाँ केही उदाहरणहरू छन् यौनका फाइदाहरू सम्बन्ध वा विवाह मा:
सेक्स तपाईको मनको लागि राम्रो छ। नियमित सेक्सले हृदयघातबाट वञ्चित गर्न सक्छ
नियमित यौन सम्बन्ध राख्नु तपाईंको प्रजनन क्षमता बढाउन सक्छ
नियमित यौन जीवनको आनन्द उठाउँदा 50 मा पुरुषहरूको लागि प्रोस्टेट क्यान्सर हुने जोखिम कम गर्न सक्दछ
नियमित सेक्स गर्दा तनाव कम गर्न सकिन्छ
स्वस्थ यौन जीवनले क्यालोरीहरू जलाएर वजन नियन्त्रणमा मद्दत गर्दछ
यसले रक्तचाप कम गर्दछ
मोरिंगा बिउहरू सुरक्षित अनलाइन खरीद गर्नुहोस्
त्यसैले अब तपाईलाई स्वस्थ यौन जीवनको महत्व थाहा छ; किन प्रयास नगर्ने र कसरी मोरिंगाले पुरुषहरूको लागि यौन प्रदर्शन बढाउन सक्छ हेर्नुहोस्।
मोरिंगा सप्लीमेन्टहरू एक उत्तम तरिका हो तपाईको सेवन सुरक्षित रूपमा विनियमित गर्न।
उदाहरणका लागि मोरिंगा क्याप्सूल प्रयोग गर्नाले तपाईलाई लामो, सशक्त निर्माण प्रदान गर्दछ र लि size्ग आकारमा बृद्धि बढाउनका लागि भनिन्छ।
तपाईले मोरिंगा सुरक्षित रूपले लिनु भयो भन्ने निश्चित गर्न अन्तमा चिकित्सा सल्लाह लिन नबिर्सनुहोस्।
मोरिंगा लिने तरिका
मोरिंगालाई प्राकृतिक तरीकामा लिनका लागि त्यहाँ धेरै तरिकाहरू छन्। तपाईं पिउन सक्नुहुन्छ मोरिंगा चिया। मोरिंगा पातहरू ताजा, पकाएको वा सुकाउन सकिन्छ।
मोरिंगा पात पाउडरलाई तपाईंको व्यंजनहरूमा मोरिन्गा थपेर तपाईंको आहार व्यवस्थामा समावेश गर्न सकिन्छ। तपाईं आफ्नो यौन प्रदर्शन वृद्धि गर्न मोरिंगा बिउ लिन सक्नुहुन्छ।
ओघामा ओसाकपामवान जुन 16, 2020 मा7मा: 30 एम
कृपया मलाई मोरिंगा बीउ र पातहरूको आपूर्तिकर्ता बन्न मनपर्छ
व्यवस्थापक जुलाई 6, 2020 मा 7: 42 एम
नमस्ते ओघामा, कृपया तपाइँको विवरणहरू तपाइँको उत्पादनहरूमा लिंकको साथ हाम्रोमा छोड्नुहोस् हामीलाई सम्पर्क गर्नुहोस पृष्ठ र हामी तपाईंलाई फिर्ता प्राप्त गर्नेछौं।
म्यानुएल मार्च मा 5, 2020 मा 11: 29 बजे
के कार्बनिक मोरिंगा पाउडर उहीसँग मद्दतको लागि मोरिंगा सप्लीमेन्ट लिने जस्तो छ?
स्टानले उजा फरवरी मा 4, 2020 मा 6: 54 बजे
म शारीरिक पेन र स्टोमेच रोगहरूको लागि मोरING्गो डाँठको पावर प्रयोग गर्दछु, बीजहरू मलाई बनाउने सीर्को महसुस गर्छन्, यदि तपाइँ जान्नुहुन्छ कि मँ के हुँ। म कुनै पनि समय व्यक्तिगत तवरले मोरिंगा सिफारिस गर्दछु।
म्यानुएल मार्च मा 5, 2020 मा 11: 31 बजे
मोरिंगा बिउ कहाँ पाउन सकिन्छ?
पछिल्लो२० शानदार प्रेरणादायक पाउलो कोएल्हो उद्धरण
अर्कोएनएलपीका लाभहरू राम्रो सम्बन्धहरू समावेश गर्दछ
के मोरिंगा पात पाउडर एक प्राकृतिक मधुमेह इलाज हो?
कुनै पनि महान बिना उत्साह बिना प्राप्त भएको थियो।
- राल्फ वाल्डो एमिर्सन